Talaabooyinka 4-ta ah ee lagu Hirgelinayo ama lagu Nadiifinayo Xogta CRM si aad u Kordhiso Waxqabadkaaga iibka | Martech Zone
Shirkadaha doonaya inay horumariyaan wax qabadkooda iibka waxay caadi ahaan maalgeliyaan istaraatiijiyadda hirgelinta maamulka xiriirka macaamiisha (CRM) madal. Waxaan ka wada hadalnay sababta shirkadaha dhaqangeli CRM, iyo shirkaduhu inta badan waxay qaadaan tillaabada… laakiin isbeddellada ayaa inta badan ku guuldareysta sababo dhowr ah:
Data - Mararka qaarkood, shirkaduhu waxay si fudud u doortaan inay ku shubaan xogta xisaabaadkooda iyo xidhiidhada ay la leeyihiin madal CRM oo xogtu maaha nadiif ah. Haddii ay hore u heleen CRM la hirgeliyey, waxa kale oo laga yaabaa inay xogta u arkaan mid niyad-jab ah oo aan awood u lahayn inay soo saaraan soo celinta maalgashiga (ROI).
Hab- - Si iibku si dhab ah uga faa'iidaysto CRM, waa in uu jiraa hab kaxeeya aqoonta hogaaminta iyo sidoo kale mudnaanta xisaabaadka hadda jira. Shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay yeeshaan hab ay ku kala horraysiiyaan hoggaanka iyo xisaabaadka haysta fursadda ugu badan.
meelaynta - Hogaamiyeyaasha cusub iyo xisaabaadka jira waa in si sax ah loogu qoondeeyaa CRM, ha ahaato gacanta ama shuruucda dhulka. Meelayn la'aanteed, ma jirto si loo dhaqaajiyo dhaqdhaqaaqa iibka.
Warbixinta - Warbixin sax ah, hufan, oo la rumaysan karo waa in loo fuliyaa labada kooxdaada iibka si ay si diyaar ah u qaataan isticmaalka CRM iyo sidoo kale kooxdaada hogaaminta.
Cusbooneysiinta - Automation, is dhexgalka, iyo hababka cusboonaysiinta gacanta ee CRM-gaaga waa in la hirgeliyaa si loo ilaaliyo saxnaanta xogta iyo si buuxda loo xaqiijiyo soo laabashadaada maalgashiga. Iyadoo aan la cusboonaysiin CRM, wakiiladu way ka tagaan masraxa oo hoggaanku wuu ku guuldareystaa inuu ku tiirsanaado.
Tallaabada 1: Diyaarinta ama Nadiifinta Xogta CRM kaaga
Xogta akoonku waxay ku jiri kartaa CRM kaaga hadda, CRM aad ka soo haajirtay, nidaamka biilasha dhoofinta, ama xitaa farabadan xaashiyaha. Si kastaba ha noqotee, waxaan inta badan ogaanaa xog xun oo u baahan nadiifin. Tan waxaa ku jira laakiin kuma koobna akoonnada dhintay, xiriirada aan hadda jirin, iibsashada, xisaabaadka nuqulka ah, iyo xisaabaadka aan qaabaysan (waalid/ilmo).
Tallaabooyinka la qaadi karo si loo lafaguro oo loo hagaajiyo xogtaada waxaa ka mid ah:
Xaqiijinta - Isticmaalka qolo saddexaad nadiifinta xogta agabka xogta shirkadda iyo sidoo kale xogta xidhiidhka si loo ansixiyo, loo nadiifiyo, oo loo cusboonaysiiyo xogtaada hadda. Tani waxay hubin doontaa in kooxdaada iyo hababkaagu ay diiradda saari karaan macluumaadka saxda ah halkii ay ku dhex socon lahaayeen xogta xun ee CRM.
Xaaladda - Aqoonsiga heerka hadda ee xisaabaadka, dhaqdhaqaaqa, dakhliga la xidhiidha, iibiyaha loo qoondeeyey, heerka iibsadaha, iyo xidhiidhka waa tallaabo weyn oo lagu go'doomiyo diiwaannada ay CRM-kaaga diiradda saarayso halkii aad ka soo dejin lahayd xiriir iyo xogta akoonnada oo aan faa'iido lahayn.
Kala sarraynta - Xisaabaadka inta badan waxay leeyihiin kala sareyn la xidhiidha iyaga. Haddi ay tahay shirkad leh xafiisyo madax banaan, guri leh macaamiil badan, ama
Mudnaansho - Dhoofinta dakhliga macaamilka ee la xidhiidha akoonnadaada ayaa ah habka ugu habboon ee lagu meelayn karo soo-dhawaynta, soo noqnoqda, iyo lacagtaRFM) qiyaasaha la kala hormarinayo iyadoo lagu salaynayo u janjeerta wax iibsiga. Habkani inta badan kuma jiro CRM aasaasiga ah oo wuxuu u baahan yahay qalab dibadda ah si loo falanqeeyo oo loo dhaliyo.
Territori - Sidee dadka wax iibinaya loogu qoondeeyaa akoon? Shirkaduhu waxay inta badan leeyihiin warshado, dhulal, ama xitaa hawlo ku salaysan cabbirka shirkadda si ay ugu lammaaniyaan wakiiladooda iibka ugu fiican akoonnada ku habboon. Markaad soo dejiso CRM-gaaga hirgelinta ama ka shaqeyso si aad u nadiifiso akoonkaaga jira, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in habkan meelaynta la hubiyay si fursadaha yaan loo dareemin.
Mararka qaarkood, shirkadaha aan la shaqeynay waxay xaddideen xisaabaadka iyo shaqaalaha iibka ee ay la shaqeynayaan CRM-kooda. Hirgelinta ku salaysan xisaabaadka muhiimka ah, tusaale ahaan, waxay wadi kartaa ganacsi aad u tiro badan halkii aad isku dayi lahayd inaad u gudbiso ururka oo dhan. Tani waxay bixin kartaa kiiska daraasadda kooxaha kale waxay u baahan yihiin inay arkaan qiimaha CRM kaaga.
Shaqaalahaaga ayaa laga yaabaa inay inta badan go'aamiyaan soo-bandhigistaada… kooxaha suuq-geynta iyo iibinta ee farsamada-yaqaannada ah ayaa badanaa wadi doona isticmaalka iyo ROI-ga degdegga ah ee CRM ee aad geyso halkii aad ka heli lahayd xoog shaqaale oo shaqada laga saaray.
Tallaabada 2: Dhisidda Isku-dhafkaaga CRM
CRM oo aan lahayn isku-xidhnaan la'aan waxay saaraysaa xoogaa miisaan iyo masuuliyad ah shaqaalahaaga si ay u maamulaan oo ay u cusbooneysiiyaan. Ma aha wax shardi ah in la isku daro CRM kaaga, laakiin waxaa aad loogu talinayaa inaad qiimeyso nidaamyadaaga oo aad aragto awoodaha aad u leedahay inaad kor ugu qaaddo xogtaada CRM.
Hogaamiyaasha - Dhammaan meelaha laga soo galo hoggaanka waa in lagu daraa CRM-gaaga oo ay la socdaan dhammaan xogta loo baahan yahay iyo isha tixraaca ee sida ay ku yimaadeen.
Enhancement - goob kasta oo dhinac saddexaad ah si kor loogu qaado xogta akoontada iyadoo la adeegsanayo firmagraphic iyo macluumaadka heerka xidhiidhka oo kaa caawin kara u-qalmitaankaaga iyo habka iibka.
Meelaha taabashada - Meel kasta oo taabasho ah oo aad haysato oo kaa caawinaya safarka iibsadaha. Tani waxay noqon kartaa booqashooyinka goobta, hababka garaacida telefoonka, suuq-geynta iimaylka, nidaamyada xigashada, iyo hababka biilasha.
Hawsha ayaa muhiim u ah wanaajinta habka iibkaada gudaha CRM iyo, inta badan, is dhexgalka fudud ayaa la tebayaa kuwaas oo si weyn u caawin kara suuqgeynta iyo kooxaha iibka si ay u horumariyaan waxqabadka. A helitaanka xogta waa dariiqa ugu habboon ee lagu diiwaangelin karo oo lagu aqoonsan karo fursadaha otomaatigga isku-dhafkaaga iyo automation kasta si loogula mideeyo nidaamyada CRM-gaaga.
Talaabada 3: Ku Fulinta Istaraatiijiyada Iibkaaga CRM
Hadda oo aad heshay xog cajiib ah, tallaabada xigta waa fahamka socdaalka iibsadahaaga si aad si sax ah u awooddo:
Go'aanso waxa a hoggaan u qalma suuqgeyn (MQL) waa in lagu meeleeyo hogaanka iibka.
Go'aanso waxa a iibka hogaanka u qalma (SQL) waa in la aqoonsado rasaasta, runtii, macmiil mudan in la raadiyo.
Dhis bilawgaaga habka iibka si loo aqoonsado tillaabooyinka wax-ka-qabashada ee iibiyuhu si uu hoggaanka ugu hormariyo fursad. Tani waxay si fudud u noqon kartaa wicitaan taleefoon oo hordhac ah si aad ula wadaagto alaabtaada ama adeegyadaada ama muujinta alaabtaada. Tani waa nidaam ay tahay in si joogto ah loo hagaajiyo muddo ka dib.
Codso adiga talaabooyinka funnel iibka xisaabaadkaaga jira oo u qoondee tillaabooyinka waxqabadka wakiilada iibka si ay ula falgalaan rajadaada.
Hubi inaad haysato a dashboard funnel iibka kaas oo ku siinaya warbixin muuqaal iyo aragti labadaba xisaabaadkaaga.
Hubi inaad haysato a dashboard waxqabadka taas oo bixisa warbixin muuqaal iyo aragti labadaba waxqabadka wakiilada iibka si aad u tababarto oo aad ula taliso iyaga.
Wajigani waxa uu bilaaba fulinta habka iibkaada cusub waxaana muhiim ah in aad la hawl gasho kooxdaada si aad u ogaatid arin kasta oo taagan oo abuuraysa jidgooyo si ay ugu guulaystaan ​​ka faa'iidaysiga CRM si ay u kala hormariyaan una dardargeliyaan hawlahooda iibka. Halkaa marka ay marayso, dhisidda dabeecadaha iyo caadooyinka isticmaalka CRM waa muhiim.
Shirkado badan ayaa dejiyay CRM-kooda, waxay leeyihiin hannaan iib iyo tababar si loo hubiyo in dadku ogaadaan waxa laga filayo inay ku sameeyaan CRM si ay u maareeyaan fursadahooda si wax ku ool ah. Dhibaatada aan inta badan arko ayaa ah in dadku aysan samayn wixii la rabay in ay qabtaan oo loo tababaray inay qabtaan. Barnaamijkeena waxa uu wadi karaa oo cabbiri karaa u hoggaansanaanta hab-dhaqankan. Si kale haddii loo dhigo, awoodda lagu maareeyo fursadda iyada oo loo marayo marxalado kala duwan ee habka iibka shirkaddu waa mid jirta, si kastaba ha ahaatee, isticmaalayaasha iyo maamulayaasha waxay doortaan (si toos ah ama si dadban) in aysan la xisaabtamin naftooda ama shaqaalahooda si dhab ah u galaan macluumaadka nidaamka. fursaddu waxay ku socotaa waqti ku habboon oo joogto ah.
Tallaabada 4: Kormeerka iyo Tababarka Waxqabadka
Ka-qaybgalka caadiga ah ee shirkadeena si ay u caawiso macaamiisha (gaar ahaan Salesforce) si ay u helaan soo noqoshada maalgashiga tignoolajiyada waxay ka bilaabataa Talaabooyinka 1 ilaa 3… anaga:
Gooldhalinta hogaanka - Waxaan hirgelineynaa hababka gacanta ama otomaatiga ah ee ku daraya RFM habka guud ee hogaaminta si aan uga caawino kooxda iibka inay diirada saaraan soo iibsigooda ugu weyn oo ay kor u qaadaan fursadaha.
Waxqabadka Wakiilka Iibka - Waxaan siinaa macaamiisheena labadaba warbixinta waxqabadka iyo horumarinta xirfadeed si aan u wadno waxqabadka heer shakhsi iyo kooxeed.
Horumarinta Hogaaminta Iibka - Waxaan siinaa hoggaamiyeyaasha iibka macaamiishayada warbixinta iyo horumarinta xirfadeed si aan u wadno waxqabadka wakiiladooda iibka iyo kooxahooda.
Warbixinta Ururka - waxaanu horumarinaa warbixinta madaxda sare ee ururka (ka baxsan iibka iyo suuq-geynta) si loo fahmo waxqabadka hadda jira iyo sidoo kale saadaalinta koritaanka mustaqbalka.
Waxaa jira shirkado awood u leh inay la qabsadaan oo ay sameeyaan tan laftooda, laakiin badanaa waxay u baahan tahay dhinac saddexaad si ay u bixiyaan qiimeynta, qalabka, hababka, iyo kartida si ay si buuxda u xaqiijiyaan maalgashigooda CRM.
Qeexida Guusha CRM
Maalgelintaada CRM si buuxda looma xaqiijin ilaa aad ka gaarto 3-daa yool:
Transparency - Xubin kasta oo ka mid ah ururkaaga wuxuu arki karaa dhaqdhaqaaqa waqtiga-dhabta ah ee ku dhex jira suuqgeyntaada iyo hababka iibka gudaha CRM kaaga si loo fahmo sida ururku uga shaqeeyo ujeedooyinkiisa kobaca.
Waxqabad - Kooxdaada suuqgeyneed iyo iibka hadda waxay leeyihiin waxqabad la taaban karo iyo yoolal loo xilsaaray kuwaas oo ka caawinaya dardargelinta dadaallada suuqgeyn ee ururkaaga iyo kobaca iibka ee mustaqbalka… ma aha oo kaliya rubuci soo socda.
Rumaynta – Dhammaan xubnaha ururkaaga rumeeyey xogta ay helayaan iyo rumeeyey in maalgelintooda CRM ay ka caawiso si sax ah falanqaynta, qiimaynta, qorshaynta, tayaynta, iyo saadaalinta iibkooda iyo suuqgeyntooda.
Arrin kale oo ku saabsan hirgelinta CRM ayaa ah in ururrada iibka ay caadi ahaan la jaanqaadaan dhaqan ahaan garaacida tiradooda rubuc kasta ama dhamaadka sanadka. Natiijo ahaan, CRM waxay u rogtay diiradda muddada-gaaban halka macaamiishooda wareegyada wax iibsiga ay noqon karaan sannado badan. Waxqabadku maaha oo kaliya in lagu dhufto kootada magdhowga ee soo socota, ee waa in hogaamintu soo saarto dhaqan kobcin iyo waxqabad taas oo u sahlaysa shirkada in ay koraan maanka iibka sanadaha soo socda.
Ma aha mid ama midka kale mid kasta oo ka mid ah yoolalkan… dhammaan saddexda waa in la buuxiyaa ka hor inta aan ururku arkin soo noqoshada maalgashiga tignoolajiyada ee CRM.
La-taliyayaasha Nadiifinta Xogta CRM
Haddii shirkaddaadu ay u guurayso CRM ama ay la halgamayso ogaanshaha kartida CRM kaaga hadda, xor u noqo inaad la xidhiidho shirkaddayda, Highbridge, xagga caawinta. Waxaanu haynaa habraac la xaqiijiyay, agabka, iyo kooxda diyaarka u ah inay caawiyaan urur kasta oo baaxad leh. Waxaan ka shaqaynay qaybo badan oo software CRM ah waxaanan khibrad gaar ah u leenahay Salesforce Sales Cloud.
Shaacinta: Waxaan ahay aasaase iyo lammaane Highbridge.
Tags: xir iibintaCRMcrm otomaatig ahcrm lataliyaha nadiifintacrm lataliyexogta crmnadiifinta xogta crmhirgelinta crmisdhexgalka crmmaamulka xiriirka macaamiishahighbridgehubsashodhibcaha hogaankahoggaan u qalma suuqgeynmqldaruuraha iibkadashboard iibkaiibinta jilitaankadashboard funnel iibkamuuqaalka funnel iibkahogaaminta iibkafursad iibkawaxqabadka iibkahabka iibkaiibka hogaanka u qalmaiibindaruur iibka daruur